Project Decorum စျေး - အွန်လိုင်း PDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Project Decorum (PDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Project Decorum (PDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Project Decorum ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Project Decorum တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Project Decorum များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Project DecorumPDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0273Project DecorumPDC သို့ ယူရိုEUR€0.023Project DecorumPDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0208Project DecorumPDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0249Project DecorumPDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.245Project DecorumPDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.171Project DecorumPDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.605Project DecorumPDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.102Project DecorumPDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0363Project DecorumPDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0377Project DecorumPDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.611Project DecorumPDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.212Project DecorumPDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.146Project DecorumPDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.05Project DecorumPDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.6Project DecorumPDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0374Project DecorumPDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0409Project DecorumPDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.849Project DecorumPDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.19Project DecorumPDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.88Project DecorumPDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩32.34Project DecorumPDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.39Project DecorumPDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2Project DecorumPDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.757
Project DecorumPDC သို့ BitcoinBTC0.000002 Project DecorumPDC သို့ EthereumETH0.00007 Project DecorumPDC သို့ LitecoinLTC0.000456 Project DecorumPDC သို့ DigitalCashDASH0.000267 Project DecorumPDC သို့ MoneroXMR0.000291 Project DecorumPDC သို့ NxtNXT1.93 Project DecorumPDC သို့ Ethereum ClassicETC0.0038 Project DecorumPDC သို့ DogecoinDOGE7.61 Project DecorumPDC သို့ ZCashZEC0.000277 Project DecorumPDC သို့ BitsharesBTS1.04 Project DecorumPDC သို့ DigiByteDGB0.997 Project DecorumPDC သို့ RippleXRP0.0887 Project DecorumPDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000916 Project DecorumPDC သို့ PeerCoinPPC0.0946 Project DecorumPDC သို့ CraigsCoinCRAIG12.11 Project DecorumPDC သို့ BitstakeXBS1.13 Project DecorumPDC သို့ PayCoinXPY0.464 Project DecorumPDC သို့ ProsperCoinPRC3.33 Project DecorumPDC သို့ YbCoinYBC0.00001 Project DecorumPDC သို့ DarkKushDANK8.52 Project DecorumPDC သို့ GiveCoinGIVE57.51 Project DecorumPDC သို့ KoboCoinKOBO5.97 Project DecorumPDC သို့ DarkTokenDT0.0251 Project DecorumPDC သို့ CETUS CoinCETI76.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 19:45:01 +0000.